ဇန်နဝါရီ 21, 2017
Boris Johnson ရဲ့ မြန်မာခရီးစဉ် ဒုတိယနေ့
ကန်သမ္မတသစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲမြင်ကွင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ သမ္မတသစ်အဖြစ် Donald Trump တက်လာခဲ့ပါပြီ။ သမ္မတဟောင်း Barack Obama လက်နေ သမ္မတသစ် Daonld Trump က ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲနဲ့ အာဏာကို ညင်ညင်သာသာပဲ လွှဲပြောင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကချင်သင်းထောက်ဆရာ ၂ ဦး၊ ဖမ်းဆီးမှု တပ်မတော်အတည်ပြု သင်းထောက်ဆရာနှစ်ဦးဟာ တပ်မတော်က စွပ်စွဲထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအပေါ် ကျူးလွန်တာမျိုး မရှိခဲ့တဲ့အတွက် တရားရုံးကိုအမြန်ရောက်စေချင်တယ်လို့လဲ ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။
နောက်ဆုံးလွှင့် တီဗွီအစီအစဉ် စနေနေ့ တီဗွီမဂ္ဂဇင်း ၀၁-၂၁-၂၀၁၇
နေ့စဉ်တီဗွီသတင်းလွှာ ၀၁. ၁၆. ၂၀၁၇
၀ါရှင်တန်က အမျိုးသမီးအရေးလှုပ်ရှားမှု မြန်မာ